Samy mankahala ny dokam-barotra ny tsirairay ... Mbola mandeha ve ny dokam-barotra aloa? | Martech Zone
Nisy resaka an-taonina maro momba ny fahafatesan'ny dokam-barotra. Twitter dia tsy nahomby loatra tamin'ny fonosana fanaovana dokambarotra. Mahomby ny Facebook, saingy mankaleo ny dokambarotra miparitaka hatraiza hatraiza ny mpanjifa. Ary ny fikarohana karama dia mitohy mampandoa fidiram-bola tsy mampino… fa ny fikarohana kosa mihena satria ny fomba hafa hikatsahana sy hitadiavana vaovao amin'ny Internet dia mitombo laza.
Mazava ho azy, raha manontany ny mpanjifa ianao (ary TechnologyAdvice sy Unbounce no nanao) dia hieritreritra ianao fa tsy misy dikany:
38% amin'ireo namaly no nilaza fa aza miraharaha amin'ny doka an-tserasera.
79% amin'ireo namaly no nilaza fa saika aza tsindrio mihitsy ny doka an-tserasera.
71% amin'ireo namaly no nilaza doka natokana ho an'ny tena manokana sy mifototra amin'ny fitondran-tena manelingelina na manelingelina.
90% ny valinteny dia nilaza fa tsy nanao a fividianana fanoloran-tena rehefa avy manindry doka ianao.
Mazava ho azy, ny fomba fijerin'ny olona rehefa anontaniana dia mety tsy hitovy amin'ny valiny azonao. Raha mieritreritra ianao fa efa ho faty ny doka na tianao tsy ho eo intsony izy dia miandrasa mandra-pahatonganao mikapoka ny rindrin'ny dokambarotra sy ny atiny tohanana na aiza na aiza. Aleoko lavitra manao dokambarotra miharihary, mifandraika amin'ny dokam-barotra manahirana!
Ny haino aman-jery karama amin'ny Internet dia manana laza tsy mitovy. Orinasa maro no mihevitra azy io ho singa iray lehibe amin'ny tetikadin'izy ireo amin'ny marketing, saingy misy ihany koa ny mpitsikera maro. Raha mijery ny tranonkala ianao, dia hahita lahatsoratra an-jatony manolotra fanao tsara indrindra hahazoana fahazoana tsindry sy fanovana, ary an-jatony maro hafa koa mamoaka ny lozisialy momba ny marketing manakorontana.
Miasa ve ny fanaovana dokambarotra an-tserasera?
Fehiny: ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao dia azo hatsaraina rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny torohevitra sasany eto amin'ity sary ity. Na izany aza, ny resaka ambany momba ny ROI. Na dia misy tahan'ny tsindry Click-through kely sy ny tahan'ny fiovam-po aza, mbola mahasoa ve ny tetika? Tsy isalasalana fa mila tetika omnichannel sy miditra ianao hampitomboana ny volan'ny firaka sy hampihena ny vidiny isaky ny kitiho; na izany aza, ny doka irery dia mety hahomby. Misy olona manindry azy ireo, sa tsy izany?
Sintomy ny tatitra feno avy amin'ny TechnologyAdvice sy Unbounce, Fianarana: Mbola mandaitra ve ny haino aman-jery karama amin'ny Internet amin'ny 2015? hianarana hoe aiza ny media an-tserasera no manana toerana hanatsarana sy ny fomba hanatsarana ny dokam-barotra nomerika amin'ny fidirana sy ny fiovam-po.
Tags: mampiseho dokadoka misy karamadokam-barotra sosialy karamadokam-barotra amin'ny karama isan-tsindrydokambarotra ppcTeknolojiaunbounce